Vanochera Matongo Vanotsigira Zvinotaurwa neBhaibheri nezvaTatenai Wemuumambo hwePezhiya
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Biak Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Maya Mbunda Mizo Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tamil Tatar Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
Hwendefa iri recuneiform rine zita rekuti Tattannu
Pane umboo hwevanochera matongo hunotsigira zvinotaurwa neBhaibheri here? Muna 2014, mumagazini inonzi Biblical Archaeology Review maiva nenyaya yaiva nemubvunzo waiti: “Vanhu vangani vanotaurwa muBhaibheri kubva kuna Genesisi kusvika kuna Maraki vanonzi nevanochera matongo vaivako?” Mhinduro yacho yaiti: “50 zvichikwira!” Asi mumwe murume ainzi Tatenai haana kutaurwa mumagazini iyi. Aimbova ani? Ngatimboongororai tinzwe zvinotaurwa neBhaibheri nezvake.
Jerusarema raimbova pasi peumambo hwePezhiya. Guta iri raiva munzvimbo yainzi nevaPezhiya, Mhiri kweRwizi, uye nzvimbo yacho yaiva kumavirira kwerwizi rwaYufratesi. VaPezhiya pavakakunda Bhabhironi vakasunungura vaJudha, vachibva vavapa mvumo yekunovakazve temberi yaJehovha kuJerusarema. (Ezra 1:1-4) Asi vanhu vaishora basa rekuvaka raiitwa nevaJudha vakanyepa kuna Mambo wePezhiya vachiti vaJudha vakanga vachipandukira hurumende. (Ezra 4:4-16) Mambo Dhariyasi I paaitonga (522-486 B.C.E.), akaudza mumwe mukuru mukuru wehurumende yake ainzi Tatenai kuti aongorore nyaya yacho. Bhaibheri rinomuti ‘gavhuna wemhiri kweRwizi.’—Ezra 5:3-7.
Pane mahwendefa ecuneiform akati wandei ane zita rekuti Tatenai akawanika panzvimbo inofungidzirwa kuti yaichengeterwa zvinhu zvemhuri. Pane hwendefa remuna 502 B.C.E. rakasainwa pashure pekutengeserana zvimwe zvinhu uye rinoratidza kuti mumwe munhu wemumhuri iyi aiva neukama naTatenai anotaurwa muBhaibheri. Hwendefa iri rinoti munhu akapupurira kutengeserana uku aiva mushandi “waTattannu, gavhuna wemhiri kweRwizi.” Tatannu akanyorwa muhwendefa iri ndiye Tatenai anotaurwa nezvake mubhuku reBhaibheri rinonzi Ezra.
Zvii zvaakaita? Muna 535 B.C.E., Koreshi akaronga patsva nzvimbo dzaaitonga kuti dzive mapurovhinzi uye imwe yacho akaitumidza kuti Bhabhironi uye Mhiri kweRwizi. Nekufamba kwenguva, purovhinzi iyi yakazodimburwa kuti pave ne2, imwe ichibva yanzi Mhiri kweRwizi. Purovhinzi yainzi Mhiri kweRwizi yaisanganisira Coele-Syria, Fenikiya, Samariya neJudha uye kunenge kuti kuDhamasiko ndiko kwaiva nemakurukota aiitonga. Tatenai akatonga purovhinzi iyi kubva muna 520 kusvika muna 502 B.C.E.
Tatenai paakaenda kuJerusarema kunoongorora nyaya yaipomerwa vaJudha, akadzoka achiudza mambo Dhariyasi kuti vaJudha vaiti Koreshi akavapa mvumo yekuvakazve temberi yaJehovha. Nyaya iyi yakaongororwa pachishandiswa zvinyorwa zvehurumende, zvikabva zvaonekwa kuti vaJudha vaitaura chokwadi. (Ezra 5:6, 7, 11-13; 6:1-3) Saka Tatenai akaudzwa kuti asiyane nevaJudha uye akateerera.—Ezra 6:6, 7, 13.
Kutaura chokwadi, ‘gavhuna Tatenai wemhiri kweRwizi’ haana zvinhu zvikuru zvaakaita zvingaita kuti anyanye kuzivikanwa. Kunyange zvakadaro, Bhaibheri rinotaura nezvake uye nezvebasa raaiita. Uhwu ndehumwe umboo hunoratidza kuti vanochera matongo vanobvumawo kuti zvinotaurwa neBhaibheri ndezvechokwadi.
Kana Bhaibheri rakanyorwa naMwari rinofanira kunge rakasiyana nemamwe mabhuku ose akanyorwa nevanhu.
Nyaya Yaunofanira Kuziva
Kubva parakanyorwa kusvikira nhasi, vanhu vakawanda vange vachitora dzidziso dzavo kubva mariri. Asi tinogona kuvimba neBhaibheri here?
Humwe Umboo Hwevanochera Matongo
Shanduro yeSyriac Peshitta—Inotibatsira Kuziva Zvakawanda Nezveshanduro Dzekutanga tanga dzeBhaibheri